ဆေးဝါးများ - ဘရာဇီးလ် အားဖြည့်ဆေး
?Clomid (Clomiphene): စက်ဝန်းအတွင်း aromatization ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန်
စာဖတ်ချိန်-6မိနစ် Clomiphene Citrate သည် Clomid ဟုခေါ်သော anabolic steroids ဖြင့် လည်ပတ်နေစဉ်နှင့် အပြီးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်»?Clomid (Clomiphene): စက်ဝန်းအတွင်း aromatization ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန်
Androgel: အဲဒါဘာလဲ အသုံးပြုနည်း ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဘာတွေလဲ။
အောက်တိုဘာလ 28, 2018
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ် ကြွက်သားများပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေရန်အတွက် အားကစားသမားများစွာသည် ၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင် Androgel ကိုအသုံးပြုလာကြသည်။ အန်ဒရိုဂျယ်… ဆက်ဖတ်ရန်»Androgel: အဲဒါဘာလဲ အသုံးပြုနည်း ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဘာတွေလဲ။
အမ်ဖီတမင်း - ဘာအတွက်လဲ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဘာတွေလဲ။ ဤနေရာတွင်သင်၏မေးခွန်းများ!
စက်တင်ဘာ 1, 2018 နိုဝင်ဘာလ 26, 2021
စာဖတ်ချိန်-3မိနစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသော အရာတစ်ခုမှာ အမ်ဖီတမင်းဖြစ်သည်။ သူမသည် တစ်ချိန်က ခံစားချက်ရှိခဲ့ဖူးသည်... ဆက်ဖတ်ရန်»အမ်ဖီတမင်း - ဘာအတွက်လဲ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဘာတွေလဲ။ ဤနေရာတွင်သင်၏မေးခွန်းများ!
Candicort: ဒါကဘာလဲ။ အသုံးပြုနည်း စာရွက်လိုချင်လား?
ဇူလိုင်လ 22, 2018 ဇန်နဝါရီလ 11, 2022
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ရောဂါပိုးများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး မှိုနှင့် တဆေးများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အရေပြားပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ ပေါက်ပွားမှုသည် ကြီးမားသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်»Candicort: ဒါကဘာလဲ။ အသုံးပြုနည်း စာရွက်လိုချင်လား?
Cytoneurin: ဘာအတွက်လဲ။ ဆူနေပြီလား စာရွက်လိုချင်လား?
ဇူလိုင်လ 22, 2018 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ် အာရုံကြောများရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသရာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော cytoneurin သည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အလွန်ထိရောက်သောဆေးဖြစ်သည်။ အစရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပါတယ်... ဆက်ဖတ်ရန်»Cytoneurin: ဘာအတွက်လဲ။ ဆူနေပြီလား စာရွက်လိုချင်လား?
Azithromycin: ဘာအတွက်လဲ။ သောက်သုံးသောကဘာလဲ? ဝက်ခြံပျောက်အောင်ကုသပေးသလား။
ဇူလိုင်လ 21, 2018 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ် Azithromycin သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသော ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှသည် အခြားအမျိုးအစားများအထိ အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာများကို ကုသရာတွင် အလွန်ထိရောက်ပါသည်။... ဆက်ဖတ်ရန်»Azithromycin: ဘာအတွက်လဲ။ သောက်သုံးသောကဘာလဲ? ဝက်ခြံပျောက်အောင်ကုသပေးသလား။
Ketoprofen: ဘာအတွက်လဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား။ သောက်သုံးသောကဘာလဲ?
ဇူလိုင်လ 17, 2018 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ် Ketoprofen သည် ပရိုဖီးနစ်ဟုလည်း ခေါ်သော ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေရန်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန်သာမက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အခြားသော ကုသရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်လည်း အသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်»Ketoprofen: ဘာအတွက်လဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား။ သောက်သုံးသောကဘာလဲ?
Acetylcysteine: ဘာအတွက်လဲ။ အထုပ်ထည့်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ မင်းမှာဆန့်ကျင်မှုတွေရှိလား။ သင်၏မေးခွန်းများကိုမေးပါ။
ဇူလိုင်လ 15, 2018 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
စာဖတ်ချိန်-4မိနစ် နာမည်ကြီး "ရင်ဘတ်အပြည့်" နဲ့ ပြဿနာရှိဖူးလား။ ချောင်းဆိုးရင် အညစ်အကြေးတွေကို နည်းနဲ့ မထုတ်နိုင်ရင်... ဆက်ဖတ်ရန်»Acetylcysteine: ဘာအတွက်လဲ။ အထုပ်ထည့်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ မင်းမှာဆန့်ကျင်မှုတွေရှိလား။ သင်၏မေးခွန်းများကိုမေးပါ။
Topiramate: အညွှန်းများ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ မည်သို့ယူရမည်၊ သောက်သုံးခြင်းနှင့်သင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှ။
ဇွန်လ 28, 2018 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
စာဖတ်ချိန်-9မိနစ် Topiramate သည် ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ (ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ) ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် အခြားဆေးများနှင့် အသုံးပြုသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်လည်း ဤဆေးကို အသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်»Topiramate: အညွှန်းများ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ မည်သို့ယူရမည်၊ သောက်သုံးခြင်းနှင့်သင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှ။